सानिमा बैंकले खोल्यो टिमुरेमा नयाँ शाखा
रसुवा । सानिमा बैंकको ४५ औं शाखा कार्यालय रसुवाको टिमुरेमा स्थापना भएको छ । मंगलबार बैंकले ४५ औं शाखा कार्यालय रसुवाको टिमुरेमा युके एडद्वारा प्रवद्र्धित सक्षम परियोजनासँगको सहकार्यमा स्थापना गरेको
बैदेशिक रोजगार बचतपत्र बेच्न कतार र दुबई हिँडे डेपुटी गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बुधबार कतार हिँडेका छन् । बैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्न शिवाकोटी कतार गएका हुन् । उनी कतार मात्रै होइन, दुबई पनि
बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको साथ चाहियोः गभर्नर डा. नेपालको बिचार
पछिल्ला तथ्याङ्कले नेपाली आर्थिक गतिबिधि प्रगतिको बाटोमा लम्कदै गरेको पुष्टि गर्छ । अर्थतन्त्रको तीन मुख्य क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग र सेवा अघिल्लो बर्षको कमजोर प्रर्दशन पछि सहजतातर्फ उन्मुख भएका छन् ।
फरवार्ड कम्युनिटीको सेयर बाँडफाँडमा अनियमितता भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा उजुरी
काठमाडौं । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले केही समयअघि निष्काशन सेयर बाँडफाँडमा अनियमितता भएको भन्दै छाविनका लागि धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको छ । आफ्नो आवेदन नम्बरमा अर्कैलाई सेयर परेको भन्दै पीडितहरु लक्ष्मी
सरकारी बैंकको अधिकृत बन्ने हो ? कृषि विकास बैंकमा ४० जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकमा रोजगारीको अबसर खुलेको छ । बैंकले ४० अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि दरखास्त माग गरेको छ । खुल्लातर्फ २२ , महिला ५, आदिवासी/जनजाती ५, मधेशी
त्रिभुवन बिमानस्थलमा प्रभु बैंकको एटीएम
काठमाडौं । प्रभु बैंक मंगलबारदेखि त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनमा नयाँ एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एटिएमको उद्घाटन त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उडड्यन कार्यालयका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले
बैंकिङ क्षेत्रले लोककल्याणमा ध्यान दिनुपर्छः गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंकिङ क्षेत्रले वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गरी लोक कल्याणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘ग्लोबल एलायन्स फर बैकिङ् अन भ्यालुज’को
रातो रंगले रंगियो नेप्से, कसले कमाए, कसले गुमाए ?
काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि सुधारउन्मूख देखिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १६.८५ अंकले घटेको छ । साताको तेस्रो दिन सेयर कारोबार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक १३४१.५६ अंकमा झरेको हो
किन आवश्यक छ, अग्नि बीमा ? के के हुन्छन्, फाइदा ?
काठमाडौं । के तपाईँले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्नु भएको छ ? सायद छैन होला । किनभने हामी नेपालीहरु बीमा गर्दा तिनिरे बीमा शुल्कलाई बोझको रुपमा लिन्छौं । र, पछि
कलंकीमा ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ३१औं शाखा
काठमाडौं । पोखरामा मुख्य कार्यालय हरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकले काठमाडौंको कलंकीमा ३१औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उदघाटन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरे । सो अबसरमा